Imwe yemabhenefiti ekurarama uye kufema niche indasitiri, sekushandisa an email agency, ndeyekuti inopa mumwe mukana wekufungisisa kuti ramangwana ringave rakadii.
Izvi zvinotevera ramangwana-chiratidzo cheiyo email kushambadzira inotaridzika segore ra2017 kune vanoita, vatengesi nevatengi zvakafanana.
Izita reMutambo Rachinja
Kurumidza kuenda kumberi makore matanhatu uye izwi rekuti "kushambadzira email" rakanyangarika kubva mumutauro wedu zvachose. Kunyangwe iri yakaderera pane 2011, email kushambadzira ichiri kuburitsa yakawanda ROI; zvisinei inongova imwe yemota yekutengesa yedhijitari.
Mune ramangwana iri, kusangana pakati pezvemagariro, nhare, nzvimbo-based uye kushambadzira-kumba hakuna musono. Mimwe migero yekutumira mameseji haina basa.
Iko kune mashoma nuances ekuendesa anoshanda mameseji kuburikidza neimwe yeaya ekushambadzira nzira, asi iwo misiyano inonyanya kutungamirwa neakanyorwa-akanyorwa zvakanaka mutengi zvisirizvo kwete yekuendesa mashandiro pachayo. Basa rekutanga rekushandisa iyi yakasanganiswa nzira yakafanana neyaive kumashure muna 2011: kugoverwa kwemashoko akakodzera uye akakodzera. Mune mamwe mazwi, chinangwa chaive, uye chagara chiripo, kuisa chipo chaicho, pamberi pemunhu chaiye, panguva chaiyo.
Nekuti mazwi eemail kushambadzira, kushambadzira pasocial uye kushambadzira nhare zvaive zvakanyanya kudzvinyirira uye zvichinyanya kugumbura mutengi-aneta mutengi, vaifanira kuenda. Kugamuchirwa kuzera reDigital Messaging.
Shanduko hombe muDhijitari Meseji yazvino yakanga isiri iyo nzira yainyorerwa; kwaive kugadzirwa pamwe nekubatanidzwa kwetekinoroji, kudiwa kwevashandi vane hunyanzvi, uye kuona uye kupa simba kwevatengi.
Shift Yaikurumidza uye Kutsvaira
Mugore re 2017, Dhijitari Meseji Vanopa (DMPs) inogona nyore kugovera zvakasarudzika mameseji ekutengesa pamidziyo, nguva nenzvimbo. Ivo zvino vanosanganisira chaiwo-enguva, inowirirana kutaurirana iyo inoyerera zvisingaite munzira nyowani migero, senge inofambidzana TV, uye zvekare, senge poindi-yekutengesa. Asi izvo zvinopihwa neDMP hazvingogumira pakuparadzira nekutevera kwemadhijitari ekutengesa. Ivo vaita kufambira mberi kunoshamisa mukuongorora kwedata uye kushambadzira otomatiki.
Kuzivisa uye mushandirapamwe kugadzirwa zvakare kune hungwaru hungwaru uye hunoshanda, zvaenda kure kupfuura kuvhura uye kudzvanya uye WYSIWYG editors. Funga kurarama, multivariate kuyedza uye kumonyoroka, yakawanda-yakachekwa inesimba yemukati musangano, inoteerera kuendesa, uye yakavharwa-chiuno, kuyambuka-chiteshi ROI kuverenga kune gumith simba.
DMPs zvakare dzinopa nzira dzakasimba dzekuunganidza dhata. Iyi data yakapfuma inodurura mukati kubva mukubatana kwese; kubva kunyorerwe zvakapusa pane nharembozha kune maitiro ehunhu akaunganidzwa kubva pasisitendi vatengi touchpoints.
Asi zvipiriso zveDMP zvakavapo nekukurumidza sei? Kudzoka muna 2012, iyo Email Vashandi Vanopa (ESPs) yakatsutsumwa, Google-dhizaini, kuchengetedza vashambadziri mukati meiyo interface-uye chete yavo interface. Tekinoroji uye nhangemutange yezvombo zvehungwaru zvakatevera.
Iwo maPerks eMitengo Yakaderera uye Simba Nyowani
Zvinorehwa neiyi Dhijitari Kutumira hondo zvaireva kune mushambadzi wezuva nezuva yaive yekuti mutengo wemasevhisi ekutumira mameseji wakatanga kudzikira zvakanyanya uye maturusi akatanga kuvandudzika nekukurumidza. Idzi dzaive pachena nhau dzinogamuchirwa kune mushambadzi asiwo kune iyo Dhijitari Meseji Vanopa, nekuti kutsvaira kwekubatanidza uye kutora kwakaitika izvo zvinoshandura zvachose indasitiri.
Pane chinangwa chekubatanidza zvese zvinoitwa nevatengesi, iyo Dhijitari Meseji Vanopa yakatanga kutora midhiya yekutarisa uye makambani ekurova data. Vakashandira analytic masterminds uye nyanzvi dzeUI. Vakavhura zvinoshandiswa zvavo kusvika pasirese uye vakaburitsa vhezheni nyowani mukota yega yega. Vakanga vari pamoto.
Iwo madiki uye epakati-epakati saizi DMPs aisakwanisa kuenderana neiyo yekumhanyisa kumhanya uye yakaderedzwa mari. Vakanga vakapwanywa kana kumedzwa. Niche vanopa vakadzoserwa kune ekuwedzera-ons. Kune musika waimbozara nemazana evanokwikwidza, ikozvino kwasara vashoma vepasi rese behemoths.
Mazuva ano DMPs inogadzira yakaderera mari-mutengi-sezvavaimboita. Nekudaro, chiyero chavo chakakura kwazvo zvekuti, dai vanga vasiri ivo vairatidzira uye nhungamiro dzekuzvidzora, vanopokana-nevanovimba nevanozvimiririra vanotanga kutora kufarira kune kwavo kuita.
Vakawana mari nyowani zvakare, pamusoro payo inogadzirwa nekupa marezinesi data revatengi ravanochengetera. Huchenjeri uhu hunopihwa, uye nekuchinjana ne, mafemu ekutsvagisa uye makwikwi ekushambadzira makwikwi sekutsvaga kwakabhadharwa, tsamba dzakananga, uye kushambadzira kwekuratidzira kwedigital.
Kukwira kweVashandi uye maTekinoroji
Iwo maturusi akazara, anopiwa neDhijitari Ekutumira Meseji Vanopa mu2017, izvozvi zvave kusvika kusvika kune angangoita mushambadzi wese. Zvisinei zvirongwa zvemadhijitari mameseji zvakanyanyisa. Vashandi vane hunyanzvi ndivo vakakosha kusiyanisa pakati pezvirongwa zvinogadzira varombo, vepakati uye vakasarudzika ROI kubva kuDigital Messaging, asi seizvo nhoroondo inotiudza kuti havazi vese nyanzvi dzaigona kucheka.
Nekuti kuzivisa kwacho kwakasimba uye kunoitika, vashambadziri havachadi mumba kana kunze kwekushambadzira masvomhu kuti vaongorore data uye vape mazano. Nekudaro iyi data ikozvino inofanira kuiswa uye zvirongwa zvacho zvinofanirwa kukwidziridzwa. Iwo ma rockstars eiyo Dhijitari Ekutumira mameseji indasitiri izvozvi anowira mumisasa miviri, mhizha uye nyanzvi.
Ivo mhizha ndevaya vanogadzira mapurani uye voaita; kuve ivo vanofunga, mamaneja, kana zvigadzirwa. Iwo mahunyanzvi ndeaya anoongorora matambudziko, ayo anotangira pakuburitsa kumhanyisa mhanyisa kusvika pakubatanidza hiccups, uye nekugadzirisa iwo.
Maitiro evatengi uye Pfungwa
Mutengi ave kunyatso kuziva nezve akawanda, asi akakosha, ekutengesa mameseji anotenderera akavakomberedza. Izvi zvakamanikidza vatengesi kuti vashandure, zvaimbove zvaive, zvinopihwa-mativi-maviri mumitauro yakatarisana nevatengi. Idzi hurukuro dzinoitika pane ese ari maviri-kune-imwe nhanho uye pakati pemapoka chaiwo. Zvinochinja nekufamba kwenguva sezvo huwandu hwevatengi uye maitiro achichinja uye achichinja netsika tsika.
Iyo data inopihwa nemutengi, uye inotorwa kubva pahunhu hwavo, ikozvino haina muganho. Mushambadzi ane ruzivo rwunoita serusingagumi mundangariro dzemunhu pamwe nemamodeli ekufanofungidzira emakirasi avo ehuwandu. Mushambadzi anoshandisa ruzivo urwu kuendesa izvo zvingangotengwa nemutengi izvozvi, uye mune ramangwana, pamwe nekufungidzira kukosha kwavo kwehupenyu uyezve kugovera zviwanikwa zvakakodzera.
Nekuti mutengi anoziva nezve kushambadzira kwetsika uye ane hanya kuti maitiro acho anozopedzisira ave anoparadza; yakavanzika-muridzi wepasirese mvumo yekuchengetedza ichangobva kugadzwa, ingodaidzwa kunzi Choice.
Sarudzo mubatanidzwa, wepakati pekuchengetedzwa kwedata uye nzvimbo yekufarira iyo iri mbiri yakachengetedzeka uye ine simba rose. Ichapa mutengi mukana wekutonga, chaizvo, rudzii rwe data rwunounganidzwa, uye rwunoshandiswa, nemushambadzi uye nemameseji api avanogamuchira, kubva kunaani, uye sei uye riinhi.
Iri ibasa remahara kumutengi asi Vanopa Dhijitari Ekutumira mameseji vanofanirwa kupa rezinesi ruzivo urwu, izvo zvinozoona kuti vanosangana nezvinotarisirwa nevatengi uye kutevedzera Dhijitari Yakavanzika Dziviriro Mutemo pamusoro 2015.
Mugore ra2017, iyo Dhijitari Meseji indasitiri ine zvese asi yakazvishandura pachayo. Mumazuva ekutanga ekutengesa neemail, mugove weshumba wemutengo, nguva nekutarisisa zvakaenda kune iyo email yekushambadzira software. Asi ikozvino sezvo masevhisi eDMPs akaitwa zvigadzirwa, kukosha kwechokwadi kweDigital Messaging kunongoenderana netarenda rinoshandisa maturusi aya.
Kudzoreredza basa iri kunoonekwa zvakare muhukama pakati pemushambadzi nemutengi. Vatengesi ikozvino vava nehanya zvakanyanya kune izvo zvinodiwa uye zvinodiwa nevatengi vavo uye tarisiro. Kana ivo vachizoenderera mberi nehurukuro mumakore anouya, ivo vanofanirwa kuve. Uye mukutsinhana neruzivo rwavo rwakadzama, mutengi anogamuchira zvakagadzirwa-zvakagadzirwa, zvakakwirira-zvakakosha zvinopihwa uye zviitiko zvekutonga pamusoro pehukama hwavo zvisina kumboitika.
Tags: demographic kushandiswadigitaalinen mameseji mupidhijitari yekuvanzika chengetedzo chiitodmpEmail Marketingemail service provideremail zanokunyanyakukosha kwehupenyu hwese
Dec 2, 2011 pa 4: 46 AM
Ini ndinofunga mumakore gumi email kushambadzira kwaizove kwaenda kwechinguva uye mameseji aizosvika kune vatengi nenzira dzakasiyana.
Dec 5, 2011 pa 10: 07 AM
Hi Vaidas - Zvichava zvinonakidza kuona kuti ramangwana rakamira sei, kunyanya kuti mameseji ekushambadzira edigital achataridzika sei. Neese 'email akafa' kutaura hausi wega mukufunga kuti email ichapetwa ikaiswa mune dzimwe nzira.